Blog-Tipping: Waa Waqtiga Lacag Bixinta Akhriste! | Martech Zone
Blog-Tipping: Waa Waqtiga Lacag Bixinta Akhristaha!
Khamiis, Juun 5, 2007 Khamiista, Oktoobar 23, 2014 Douglas Karr
Yaanan midba midka kale waqtiga ka lumin! Waxaan rabaa inaan ku caawiyo bartaada internetka ama degelkaaga si dhakhso leh oo hufan OO waxaad ka heli doontaa xoogaa xiriir jacayl ah boggeyga.
Xusuusintaasi waxay wadi doontaa taraafikada waxayna kaa caawin doontaa qiimeyntaada Teknolojiyada iyo Makiinadaha Raadinta. Si taas loo sameeyo, waa inaan ku soo dhuunto bartaada, iyo tip waa!
Sida loo helo Taabashadaada Blog:
1. Ku sheeg bloggeyga bartaada.
2. Meel khad ah iigu dhig faallooyinka qoraalkan oo leh xiriirin ku saabsan boostadaada.
Ballanqaaday: Waxaan ku qaadan doonaa dhowr daqiiqo dib-u-eegista qaabkaaga, isticmaalkaaga, SEO, iyo qoraaladaadii ugu dambeeyay si aad uhesho wax kaa caawin doona hagaajinta boggaaga ama bartaada internetka. Waxaan sameyn doonaa dadaal ah inaan ka dhigo caarada mid gaar u ah baloog kasta ama degel kasta halkii aan isku dayi lahaa inaan iska fogeeyo oo aan si wada jir ah 'caano' u qoro bogag badan.
Waa intaas! Aan u gudubno blog-tapping!
Xor ayaad u tahay inaad u gudbiso xiriiriyahan cidda aad rabto.
Tags: tilmaamid blogdib u bixinta aqristaha
Google Adwords: Keydso lacag yar…
Blog-Tipping: Khayaali + Hal-abuurnimo
Jul 5, 2007 markay tahay 10:56 PM
Ma diidi doono dalabkan wanaagsan.
Jul 6, 2007 markay ahayd 6:12 AM
Talo ayaa lagugu siiyay! 🙂
Jul 6, 2007 markay ahayd 1:52 AM
Hey Doug, waxaan ku dhajiyay xiriiriye bartaada:
Waxaad leedahay baloog runti aad u fiican runtiina wax badan ayaan ka baranayaa.
Jul 6, 2007 markay ahayd 9:47 AM
Muddo intee le'eg ayuu dalabkani socon doonaa? Waxaan hayaa xoogaa shaqo guri ah oo aan sameeyo (maya, ma doonayo inaan isku dayo inaan ku farsameeyo xoogaa shaqo cusub 'blog' dhexdeeda si aan ugu sharaxo nadiifinta ay tahay inaan ku sameeyo waxyaabaha ku jira :).
Jul 6, 2007 markay ahayd 11:24 AM
Jul 6, 2007 markay ahayd 11:52 AM
Diyaar u ah in la tabto 🙂
Jul 6, 2007 markay tahay 2:43 PM
Waxaan doonayay inaan ku weydiiyo inaad dib u eegto qoraalkayga wakhti aan hadda ahay, mana dhaafi karo tan! http://www.srcoley.com/2007/07/06/going-hoofs-up/
Jul 6, 2007 markay tahay 4:04 PM
Blog wuxuu u baahan yahay inuu ahaado af ingiriisi? Mahadsanid
Jul 6, 2007 markay tahay 6:20 PM
Waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo talooyin ku saabsan barta aan ku qorneyn Ingiriisiga. Waxay u egtahay caqabad weyn. Ma xukumi doono nuxurka, dabcan, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan fiiriyo qaabka, qaab dhismeedka, SEO, iwm!
Jul 7, 2007 markay ahayd 6:26 AM
Diyaar u ah in la tilmaamo…
Jul 7, 2007 markay ahayd 7:11 AM
Mar labaad! Waad ku mahadsantahay jawaabtaada!
Waa kan isku xirka:
Jul 7, 2007 markay tahay 3:26 PM
Doug - ha ahaato ama ha ku soo dhowaato inaad dib u eegto Hamelife - waad ku mahadsan tahay dalabkan weyn.
Waxaan kugula xiriiray qoraalkeygii ugu dambeeyay: Oh, My! Gabdhaha Bennet Waxay Kujiraan Iskuxirayaasha Toddobaadka.
Wixii talo ah si sharaf leh ayaa loo qaadan doonaa.
Jul 7, 2007 markay tahay 5:22 PM
Waxaan kudaray xiriirin bartaada ah boggeyga, oo kutaala dhinaca midig ee hoose boggeyga.
Jul 8, 2007 markay ahayd 4:25 AM
Hmm, oo ku saleysan soo bixitaanka, waxaan rajeynayaa inaad haysatid dhowr goon oo Doug ah oo jiifa around
Jul 8, 2007 markay ahayd 11:09 AM
Waa u qalantaa shaqada! Maxaa qosol badan ayaa ah markii aan bilaabay, runtii waxaan kaliya rabay inaan sameeyo hal talo oo halkii boloog ah - laakiin isma caawin karo naftayda mar aan bilaabo!
Jul 8, 2007 markay tahay 9:53 PM
Maqaalku wuxuu soo dhejin doonaa Jimcaha… Mahadsanid!
Jul 9, 2007 markay ahayd 8:39 AM
Waxaan jeclaan lahaa inaan kugu soo qaado dalabkaaga. Boostada lagu tilmaamay bartaada waxay ku taal:
Iyo baloogga aan jeclaan lahaa inaad wax ka sheegto wuxuu ku jiraa URL-ka. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, ii soo dir iimayl, waana ku mahadsan tahay.
Jul 9, 2007 markay ahayd 9:51 AM
Waa maxay dalab weyn Douglas. Waad ku mahadsantahay wadaagida caqligaaga. Waa tan qormadayda qormada. Waan ku helay inkasta oo aan ka mid ahay rukhsaddayda blog-ka Dawud Miracle. Nabadda.
Jul 9, 2007 markay ahayd 10:33 AM
Waan jeclahay tan, Doug! Guul-guul - waxay ku habboon tahay ruuxda wax-qorista si aad u fiican. 🙂
Jul 9, 2007 markay tahay 9:26 PM
Jul 11, 2007 markay ahayd 8:31 AM
Tani waa dallacsiin la yaab leh. Waxaan isku dayayaa inaan ogaado sida aan ugu samayn karo wax la mid ah akhristayaashayda!
Waa tan qoraalkaygii.
Blog Suuq geynta Ganacsiga Yaryar ee Ukunta
Jul 12, 2007 markay tahay 12:02 PM
Fikrad weyn oo suuqgeyn ah Doug. Haddii aad haysatid daqiiqado aad dib ugu eegi karto degelkeyga markaa caqligaaga aad baa loo qadarin lahaa.
Jul 13, 2007 markay ahayd 2:07 AM
Doug ayaa laguu tilmaamay http://netglobalbooks.com/blog/
Wixii talo ama tusaale ah si weyn ayaa loo qiimeeyaa.
Waxaan dib ugu noqon doonaa talooyin fiican iyo waxbarasho ka socota bartaada.
Jul 13, 2007 markay ahayd 7:32 AM
Saaxiib qabow, waa maxay fikrad!
Ku xidhan adiga.
Jul 13, 2007 markay ahayd 8:06 AM
Doug - Waan iska caabin kari waayey naftayda markii aan ka bartay sayidkiisa laftiisa
Waa tan qoraalkeyga
Waxaan jeclaan lahaa fikradahaaga ku saabsan sida super super loogu soo rogo balooggeyga
Jul 13, 2007 markay tahay 2:50 PM
Waxaan helay fikrad ah inaan ku hubiyo oo aan ka helo "BLOG Tipped" mid ka mid ah boggaga internetka ee fav, "Istaraatijiyadaha Webka ee Jeremiah."
Marka Fadlan Oh Fadlan Tilmaan Qoraalkeyga! Dad badan oo hore u sii Mahadsanid Adiga!
Jul 15, 2007 markay tahay 5:15 PM
OK, halkan waa codsi kale.
Jul 16, 2007 markay tahay 8:47 PM
Kani waa boggeyga baloogga, fadlan u sheeg.
Jul 17, 2007 markay ahayd 2:47 AM
Bixin Fiican Runtii waan isticmaali lahaa xoogaa caawimaad ah!
Jul 18, 2007 markay tahay 10:07 PM
Doug hi, waxaan horey u sameeyay qoraal aan ku xusayo rabitaankaaga wanaagsan ee ah inaad na caawiso
Waa tan xiriiriye, thanx 🙂
Jul 19, 2007 markay tahay 4:36 PM
Waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan xikmadaada u adeegsado…
Jul 20, 2007 markay ahayd 7:50 AM
Haddii aad weli xoogaa "tipping" tamar ah kuu hartay, waan jeclaan lahaa haddaad u fiirsato geesiga PPC.
Tixgelinta Blog: Waxyaabaha Xiga ee Weyn
Jul 21, 2007 markay tahay 9:43 PM
Boostada loo qorsheeyay subaxa Isniinta:
Waxaan raadinayaa wax kasta oo ay tahay inaad igu tuurto - template, layout, SEO - wax kasta iyo wax kasta. Waxaan doonayaa inaan sameeyo dib-u-habeyn xoog leh waxaanan u baahanahay inaan ogaado waxa shaqeeya iyo waxa aan shaqeynin.
ugu wanaagsan oo dhan!
Jul 23, 2007 markay ahayd 7:59 AM
Waxay umuuqataa sheygan tilmaamid inay mashquul kugu noqon doonto. Waa kan qoraalkeyga oo leh xiriiriyahaaga:
B2B IT iyo Warbaahinta Bulshada 2: Aragtida Iibiyaha
Mahadsanid, iyo nasiib wacan!
Jul 31, 2007 markay tahay 1:16 PM
Kama gudbi karo wanaaggan dalab.
Agoosto 1, 2007 saacaddu markay ahayd 3:02 PM
Doug - halkan waa iskuxirka boggeyga internetka oo ah xubin ay xubno ka yihiin bulshada falanqeeyayaasha ganacsiga iyo xirfadleyda adeegsiga .. Waxaan sidoo kale xiiseynayaa sida loo xoojiyo xubinnimada bulshada isla markaana dadka looga ilaaliyo inay soo noqdaan. BTW, waan “sii-bixiyey” safar booqashadaada xigta si aan ugu quudiyo maandooriyaha kaafiinka ee Starbucks!
Waxaan sidoo kale kuugu darayaa blog-kaaga Qolkeena Quudinta oo ku yaal http://www.mycatalyze.org/Blogs/CatalyzeBlogsFeedRoom/tabid/1301/Default.aspx.
Waad ku mahadsantahay talooyinka aan horeyba uga soo qaatay wareysigaaga Paul Dunay.
Oktoobar 1, 2007 at 4:40 PM
Doug - kaliya miyaad la yaabban tahay goortaad u dhowaan doontid inaad calaamadeyso balooggeyga? Waxaan kudaray bloggeyga liistadaada sugeysa 8/1 hadana waa 10/1 - oo lagu daray waxaan horey kuugu soo iibsaday Starbucks.
Blog - cinwaan = ”Xikmada hada jirta”
Aug 2, 2007 at 8: 11 AM
Hello Doug; ma hubo inaan xaqan sameeyay. Waa tan booggeynteyda bishaan. Waxaan soo gaabiyey qoraaladayda 'blogtops' markii aan bilaabay markii hore; oo waxay noqdeen kuwo aad uxusuus badan bog kale kadibna dhab ahaan usiiya talooyin. Waxaan jeclaan lahaa talo kasta oo aad igu wareejin karto.
Aug 10, 2007 at 5: 50 AM
Wixii macluumaad dheeri ah!
Febraayo 5, 2008 saacadu markay tahay 5: 32 AM
Waxaa jira qoraallo taxane ah oo ku saabsan cabbirka suuq-geynta bulshada. Waxaan boostadaada halkan ugu isticmaalay tusaale wanaagsan oo ah kobcinta darajada Hay'ada Technorati. Waan hubaa inaad dhoola cadeyn ka helayso, eeg halkan:
Marmarka qaarkood waa fayras hubaal laakiin laga yaabee inaysan ahayn isku-dhaf - waa ganacsi 😉